ညှိနှိုငျးဖလှယျပှဲ | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ညှိနှိုငျးဖလှယျပှဲ
ဟေး, Jack! That seminar I sent you to last week? Any chance you can give us all an overview at the team meeting?" Jack's boss had just delivered his worst nightmare. Not only had the event been tedious and disjointed, he couldn't find the paperwork to remind himself of the key points and his memory was not providing any brilliant clues. You want your event to be memorable. You want it to flow effortlessly from beginning to end. You want every aspect of the event to be prof...
four-ဒေါ်လာဓါတ်ငွေ့နှင့် Video Conferencing
အရောင်း Techniques & အဆိုပါအရောင်းခေါ်ရန်၏မရဏ
ပြည်သူ့ခုနှစ်တွင် Speaking တစ်ဦးကယောဘကိုပြည်လွယ်ကူသောသိကောင်းစရာများ
သင်အမှန်တကယ်လိုလျှင်သင်ကမလှယျကူစေနိုင်. သင့်ရဲ့လက်တန်းစကားပြောကျွမ်းကျင်မှု hone နိုင်ရန်အတွက်နာမည်ကျော် Toastmasters နှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုတက်ရောက်၏ပုံမှန်အတိုင်းအကွံဉာဏျပေးမညျ့သူမြားရှိသျောလညျး, ဒီကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင်တို့ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျအဖြစ်ကောင်းသောသတ်မှတ်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှုသတိထားဖ​​ြစ်ခြင်းကဲ့သို့မလိုအပ်ပါဘူး, ပိုကောင်း, အကောင်းဆုံး, သို့မဟုတ်တိုးတက်မှုလိုအပ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏စွမ်းရည်အဆင့်ကိုသိနှင့်သင်ခံစားရလျှင်သင်အများပြည်သူအတွက်စကားပြောတစ်ကယ့်ကိုအလုပ်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အောက်ပါတစ်ဦးကိုပူးတွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံလွှာန်ဆောင်မှု outsource- တစ်ဦးချင်းဆေးသမားဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံလွှာန်ဆောင်မှုများ outsource သင့်ပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံဝန်ဆောင်မှုများကို outsource မှတစ်ဦးကဆရာဝန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှုပ်ထွေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ဤသည်အလွန်ခက်ခဲသေးအရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်၏အကောင်းအဆိုး cons အမှာစကားပြောကြား.
franchises မှတဆင့်လူနည်းစုမိတ်ဖက်တည်ဆောက်ခြင်းသင့်လုပ်ငန်းကြီးထွားကူညီပေးနိုင်ပါသည်, ဘီးမရေိက Advertising ကြော်ငြာ၏ Henryk Strzeletz အညီ.
အမေလုပ်ငန်းရှင်များအဘို့အ Juggling စီးပွားရေးနှင့်မိခင်များရဲ့ Fine Art
ဒါဟာစီးပွားရေးနှင့်မိခင် juggle ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာတစ် mom, နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုတစ်ဦးပုံပြင်ရဲ့.
တစ်ဦးက Teleseminar လုပ်ပါရန်ကိုဘယ်လို
သင်တစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံရောက်နေတယ်ဆိုရင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းပြ, ဆရာမ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, စပီကာ, ရှေ့နေ, တိုက်ရိုက် marketer, သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်တန်းဆရာ, သငျသညျအခွားသူမြားအားအသိပညာနှင့်တန်ဖိုးဖြစ်နိုငျသောကျွမ်းကျင်မှုများရှိသည်နှင့်သောသူတို့သည်ပညာအတတ်သည်အဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်အွန်လိုင်းကိုသင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမပူဇော်? ဒီနေရာမှာတစ်ဦး teleseminar လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်. ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ပိုက်ဆံများများရှိပါတယ်. ထိုအခါတခုဝင်ငွေစေရန်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းသငျသညျကိုခစျြတစ်ခုခုအကြောင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခွငျးအားဖွငျ့သည်နှင့်ပျော်မွေ့. Teleseminars ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့အမြတ် margin နဲ့ကြိမ်မြောက်ပြီ ...
ဘယ်လို Long ကသငျသညျငွေရှာခြင်းမပြုမီ?
မူလစာမျက်နှာမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းအားဖြင့်တစ်နှစ်လျှင် 6-ကိန်းဂဏန်းများ Make
စာအုပ်တွေ hit ဖို့အချိန်! တစ်ဦးဆရာဝန်သို့မဟုတ်ရှေ့နေသူတို့၏လယ်ပြင်၌အောင်မြင်မှုရရန်လေ့လာဖို့ရှိပါတယ်ရုံနဲ့တူ, အိမ်စီးပွားရေးအတွက်အောင်မြင်မှုရရန်ရှာဖွေနေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတူညီလုပျဆောငျရမညျ. သငျသညျအတိအကျကြောင်းအဖြစ်သင့်လုပ်ငန်းပြုမူဆက်ဆံဘူးဆိုရငျ, အလွန်အောင်မြင်မှုရရန်ခဲယဉ်းဖြစ်လိမ့်မည်. အဆိုပါပိုမိုနီးကပ်စွာသင်တစ်ဦးနေအိမ်အခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးဘုံ၌ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခြင်းရ, သင်အောင်မြင်မည်ကို ပို. အောင်မြင်မှုရ. ကိုသတိရပါ ... သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တာဝန်ခံများမှာ. သင်တို့အဘို့အကျင့်တို့ကိုကျင့်သောအခြားသူများအပေါ်အားကိုးမနေပါနဲ့. က G ...
Alvin ဒိုနိုဗန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေ Alvin ဒိုနိုဗန်
Alvin ဒိုနိုဗန်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိဆွေးနွေးပွဲများကိုပေးအပ်သည်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးလူအချို့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်. အဘယျသို့ Alvin ဒိုနိုဗန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်သူတို့အားလုံးချက်ချင်းအခြားနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်ဆိုပါသည်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပိုပြီးအောင်မြင်စေနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
အသစ်နှင့်လတ်ဆတ်သောစိတ်ကူးများထုတ်နေတဲ့အောင်မြင်တဲ့အိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အဓိကအရေးဖြစ်ပါသည်. အတွေးအခေါ်များဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့လိုအပ်နေပါသည်, သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်နှင့် advertising, သငျတို့သကွုံတှေ့ရနိုငျကွဲပြားခြားနားသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အသုံးပြု.
ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဂယ်ရီချပ်မန်းမှအသားနှင့်အသောက်များမှာ, သူဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများလေ့နှင့်အကြောင်းကြားကြောင်းအကြံပေးကုမ္ပဏီပြေး (CRM). သူ့ကုမ္ပဏီအပတ်စဉ်အပေါ် အခြေခံ. တိုင်းပြည်ပတ်ပတ်လည်အများပြည်သူနှီးနှောဖလှယ်ပွဲပြေး, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကိုယ်စားလှယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျ; သင်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအဖြစ်အပျက်စီစဉ်နေကြသည်လျှင်ဤနေရာတွင်သင်အားမိမိအကွံဉာဏျဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရချိတ်ဆက်ဖို့သရုပ်ပြသင်ပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ...
သူတို့ကသင့်ရဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာအဘယ်အရာကိုမျှလေ့လာပါ အကယ်. သင်ကအဘယ်သူသည်အပြစ်ရှိသမျှပါနဲ့?
Ted, အဲလစ်, Pete နှင့်သူ Rita အားလုံးအတူတူပင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတက်ရောက်ကြသည်. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အရာတစ်ခုခုကိုသင်ယူဖို့မြျှောလငျ့, သူတို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်အားလုံးရဲ့ပြီးနောက်. ဒုက္ခသူတို့တစ်ဦးချင်းစီသင်ယူမှု၏အလွန်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိသည်, ဒါကြောင့်ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲပိုကောင်းအကောင့်သို့ဤယူခဲ့ကြောင်းသို့မဟုတ်ထိုသူအချို့ကွာစိတ်ပျက်လာစေခြင်းငှါ. Ted သူသည်မိမိအမေးခွန်းတွေကိုကျေနပ်အဖြေကိုရသူ bei သောသီအိုရီများနှင့်အတူအိမ်မှာရှိနေတဲ့မှမရနိုင်ကြောင်းစိတ်ပျက်ခဲ့နိုင်ဘူးဘယ်မှာမီကဖြစ်ရပ်များခဲ့ ...
လူအတော်များများဟာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ soundbites နားမလည်ကြဘူး. သူတို့ကမရောင်းကြောင်း soundbites ဖန်တီးရန်မည်သို့မသိရပါဘူး. သူတို့ကလိမ္မာပါးနပ်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့မရဲ့မသိရပါဘူး, ဖျော်ဖြေမှုသို့မဟုတ် quippy. ဒါကတီဗီနှင့်ရေဒီယိုကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ပျော်ရွှင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မကြာခဏဆိုသလိုသင်တို့အဘို့အရှာနေရလဒ်မျိုးအတွက်မရောက်စေ: သင့်လုပ်ငန်းကြီးထွားဖို့, ပိုပြီးကုန်ပစ္စည်းရောင်းချ, အသစ် clients များရ, ပိုပြီးဖောက်သည်, သို့မဟုတ်သင့်အခကြေးငွေတိုးမြှင့်. သင်၌နေသောသူအားဟောပြောသော soundbites ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုခငျြ, သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါနှင့်မည်သို့ကောင်းစွာသင်ကိုယ့်ပြုပါ ...
ဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်ထမ်းပါဝင်လာခြင်းကလှုံ့ဆျောနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမ
တစ်န်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအပေါ်ချွတ် check လုပ်ထားခံရဖို့ရာတစ်ခုခုမဖြစ်. အင်အားအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းများအောင်မြင်မှုရဲ့အဘို့မိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မဟာဗျူဟာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုပ်. အထင်ရသော unmotivated လှုံ့ဆျောမှုအားဖြင့်သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ.
ငါ့ကိုသန်းပေါင်းများစွာ Make ကူညီဒါကဆယ်ပါးရိုးရှင်းသောအရာ
ငါခဲ့သည်ကတည်းကငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ့တယ်9အသက်အနှစ်. ငါစတင်ခဲ့ပါတယ်, ဝယ်, ထိုအချိန်မှစ. အချို့ထူးဆန်းနှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားအမျိုးမျိုး၌ရောင်းထွက်ကူညီပေးခဲ့. ငါကအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့လိုခငျြပါဘူးအရာအားလုံးပြုမိပါဘူး, ငါပျော်ရွှင်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်င်. အထူးများ၏တချို့က: ငါ Wall Street မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့, ငါသည်တကုမ္ပဏီအများပြည်သူယူကူညီပေးခဲ့ငါသည်ငါ၏ရုံးထဲကနိုင်ငံအတွင်းအကြီးမားဆုံး VC ကိုနာမည်တွေထဲကတစ်ခုပစ်ချ. ငါအွန်လိုင်းနဲ့အော့ဖ်လိုင်းအာကာသအတွင်းအကြီးမားဆုံးအမည်များအချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, တစ်ဦး ...
အကျိုးစီးပွားဖန်တီးကြောင်းတယ်လီဖုန်းအဖွင့်ထုတ်ပြန်ချက်များဖန်တီးခြင်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သော့ချက်ဒြပ်စင်အချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကနာမည်ကြီးစပီကာနှင့်သင်တန်းဆရာအနုပညာ Sobczak တင်သွင်းအဖြစ်အမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ်ထုတ်ပြန်ချက်များဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ယဉ်ပါးကိုရှောင်ကြဉ်, ဖုန်းအားဖြင့်စီးပွားရေးသမ္မတ.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Virtual လက်ထောက်စီးပွားရေးနှင့်အတူငွေရှာဖို့ဘယ်လို
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Virtual လက်ထောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူယခုနှစ်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူငွေရှာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထွက်ရှာမည်.
အရောင်းခဲ: ရှည်လျားတဲ့-Term အရောင်းခဲ မှစ. ကိုယ်တော်၏အရောင်းအမြင့်ဆုံး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းရန်သင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရရောင်းအားသင်၏အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနှစ်ကောင်ကုန်ကျစေခြင်းငှါဦးဆောင်. တစ်အမြတ်အစွန်းငွေချမှတ်ခြင်းစက်သို့သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. အရောင်းခဲစျေးကွက်၏လေးပုံသုံးပုံကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိ?
9 Millionaire စီးပှားရေးသမားအဖြစ်များသည့်အတွက်ဖူးဒါကဝိသေသလက္ခဏာများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ငွေရတတ်သောသူနှင့်အစွမ်းထက်သောလူဘုံမှာဘာရှိဘူး? သူတို့ကမပါသမျှကွဲပြားခြားနားသောအခြားအ-ဒါ-အောင်မြင်သောမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှမဟာဗျူဟာနှင့်ပြပွဲဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအသက်ရှင်နေထိုင်. သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ? သူတို့ကစိတျထဲတှငျဤအသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုစောင့်ရှောက်ရန်မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်.
Long က Copy ကူးပြီးတော့အခြားယူမှားယူတာပဲ
ငါမကြာသေးမီကအမြတ်အစွန်းနှင့်အမြတ်မရသောဆိုဒ်များတစ်အကြီးအကျယ်လေ့လာမှုပြီးဆုံး. အဆိုပါအကျိုးအမြတ် site ရဲ့ရောင်းအားစာတစ်စောင်၏ပျမ်းမျှအလျားခဲ့သည် 1.8 စာမကျြနှာ. အဆိုပါအသုံးမရသော site ရဲ့ရောင်းအားစာတစ်စောင်၏ပျမ်းမျှအလျားခဲ့သည်2စာမကျြနှာ. တိုတောင်းကြော်ငြာမိတ္တူရှည်လျားမိတ္တူထက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းခဲ့သည်. ယူမှားကြောင်းသင်တန်း. များသော, အမြားအပွားကျော်ကြား copywriters ရှည်လျားမိတ္တူကျိန်ဆို. သို့တိုင် '' လေ့လာမှုခိုင်လုံသောကြီးကအချက်ဖြစ်ပါသည် '' အကျိုးအမြတ်က်ဘ်ဆိုက်များလူသိများလျော့နည်းအမြတ်အစွန်းဆိုဒ်များထက်တိုတောင်းမိတ္တူခဲ့လူသိများ ...
Can you relate to this dilemma? I sit on my keister too many hours each day while I'm working. With the holidays coming, I'malittle worried about it... growing. Without getting into too many details about my keister, we'll just say that it's definitely not the best thing for any keister to be sitting too long each day and leave it at that. Do you spend too much time in your swivel chair, လွန်း? That got me thinking. A lot of my time sitting is spent listening to r...
10 သို့ပြန်သွားရန်လာသင့်ဖောက်သည်သိမ်းဆည်းထားပါရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများ – ကာထာဝစဉ်ကိုသင်နှင့်အတူငွေကြေးသုံးစွဲ!
You want customer loyalty in your business. You want repeat business. How about making your customers into valued friends? Showing concern and empathy for their situation. The more your able to treat your customers as friends, the more business they will want to do with you. You'll watch your profits soar. Let's go through 10 ways you can keep your customers coming back to you, time and time again. And you will no doubt make "မိတ်ဆွေများ" ဖြစ်စဉ်အတွက်. 1. Send Birthday Ca...
တခါတရံအမှုအရာအပေါ် skimping သငျသညျကောငျးမှပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ. သို့သော် skimping အမြဲတမ်းပညာအရှိဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး. ဥပမာ, Microsoft Word ကိုဆန့်ကျင်သကဲ့သို့ငါပြတင်းပေါက်အစီအစဉ်ကို notepad ၌ဤဆောင်းပါးကိုစာဖြင့်ရေးသားပါတယ်နိုင်, နှင့်အကောင်းတစ်ဦးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် $500 နှင့်သို့သော် '' Microsoft Office ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါမရှိခဲ့ဘူး, ကရကျိုးနပ်မဖြစ်လိမ့်မယ် $500 ငါ့အစာပမြေား၏အားလုံးအတွက်န့ ်. ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏တိုးတက်လာသောစှဲအချို့ဘယ်လောက်အမြတ်အစွန်းအတွက်ဆယ်ဆစပါးကိုရိတ်လျှင်? သင်ဖတ်ကြမလား ...
သူနာပြုအမျိုးမျိုးသောသည်အခြားအသက်မွေးဝမ်းအကြားရိုးသားမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်များမြင့်မားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့အလွန်မှတ်အလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါသည်. သူနာပြုကျော်နှင့်အတူအကြီးဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသိမ်းပိုက်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည် 2.7 သန်းအလုပ်အကိုင်များ.
လျင်မြန်စွာငွေရှာဖို့အဆိုပါအွန်လိုင်းလျှို့ဝှက်ချက်(တစ်ဦးက Read ဖြစ်ရမည်)
လူငယ်တစ်ဦးကိုမလေးရှားသန်းကြွယ်သူဌေးဂျေဆန် Tan ကသူတစ်ပတ်ကိုသာနာရီအနည်းငယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသန်းပေါင်းများစွာသောစေသည်ဘယ်လိုအပေါ်သူ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသ. သာလျှင်မလေးရှား Mah ခုနှစ်တွင် Jason မြောက်မြားစွာအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်အရေအတွက်ကတဦးတည်းအခွင့်အလမ်း rated ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မဂ္ဂဇင်းတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး. Little ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံပြင်ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့.
ဒီ Lynne နှင့် Dave ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်.
What canaVisa merchant account do to help your company? You might be surprised. Talk to colleagues in your field of business, and chances are many of them already haveavisa merchant account. အများအားဖြင့်, the way it works is thatabank or other financial institution will review your application foramerchant services account that can be attached toacompany Visa account you are currently using or wish to open. If your company's credit history and current line of business ...
သင့်ရဲ့ Numbersdont Chase သင်မည်သို့လက်ရှိအရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကျွမ်းကျင်မှုသတ်မှတ်ကြဘူးခွဲတမ်းပြီးနောက် Run? ကြည့်ယူပေးနိုင်ပါတယ် (3) သိသိသာသာသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်လ-အဆုံးထဲက guesswork ယူလိမ့်မည်ဟုမရှိမဖြစ်ရောင်းအားအရည်အသွေး.
Richlevin သင် Alameda ကယ်လီဖိုးနီးယား Realtor သင်တန်းကိုထောက်ပံ့ပေး
Realtor အလုပ်ရှာဖွေရေးတည်ဆောက်ရန်အွန်လိုင်းအိမ်ခြံမြေသင်တန်းနှင့်အိမ်ခြံမြေနည်းပြ. အိမ်ခြံမြေနည်းပြသင်တန်းများပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများနှင့် Realtor စျေးကွက်အကြံပြုချက်များကိုရယူပါ. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်လွှမ်းခြုံနေသောကြောင့်အိမ်ခြံမြေနည်းပြနှင့်လေ့ကျင့်ရေးစနစ်ကထူးခြားသည်.
သင့်ရဲ့ Next ကိုပွဲစီစဉ်: အားလုံး Speakers Talk နိုင်သလား?
ဒါဟာသူ့ရဲ့အထူးကုဘာသာရပ်အပေါ်ပြောဆိုရန်ဖိတ်ခေါ်လက်ခံရရှိရန်ချော့မော့ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း, ဒါဝိဒ်သည်ဂျွန်ဆင်မတိုင်မီကြီးမားသောပရိသတ်ကိုတင်ပြတစ်ခါမျှ. သူကဦးနှောက်အာရုံကြောခဲ့သည်, မိမိအအတွေးအခေါ်များကိုလက်ခံရရှိမယ်လို့ဧည့်ခံအကြောင်းကိုဒါပေမယ့်လည်းမိမိအအောက်မှ-ဖွံ့ဖြိုးတင်ဆက်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်သက်. မသာ. အဆိုပါဖိတ်ကြားချက်ကိုဖြစ်စေခေါင်းစဉ်မအကူအညီဖြင့်သူ့ကိုပေးအပ်နှင့်အဖြစ်အပျက်၏ကြိုတင် disk ပေါ်မှာဟောပြောချက်၏ရေးသားထားသောဗားရှင်းအဘို့ကိုသာမေးလျှင်,. တချို့ကနှီးနှောဖလှယ်ပွဲရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းကိုအောက်ပါဧည့်စပီကာများစာရင်းကိုရှိပါတယ် ...
လူအပေါင်းတို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. ထံမှ EDC ရွှေခြားနားစေသောအဘယျသို့?
လူအပေါင်းတို့သည်အခြားအွန်လိုင်းအခွင့်အလမ်းများကိုထံမှ EDC ရွှေ seperates သောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ.
အွန်လိုင်းပိတ်သူတို့ရဲ့ Socks များမှုတ်!
သင့်ရဲ့ Next ကိုကော်ပိုရိတ် Event Planner ကရွေးချယ်ခြင်း
ခုနှစ်တွင်သင့်စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်များ Set 10 ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ: သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုများအတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ထားဖို့ကိုဘယ်လို
စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု – သငျသညျငါ့ကိုအဆိုပါ Feature ကိုပုတ် Give
တစ်ဦးမှာ Data Center ကိုခုနှစ်တွင်အလုပ်အဖွဲ့၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ခင်ဗျားတိုင်သင့်ရဲ့ Data ကိုဖွင့်ရန်ကူးယူခြင်းမဟုတ်ကြသည်?